RMIT University - Hel Waxbarashada Sare Abroad ee Australia
gaabinta : RMIT
Ardayda (qiyaastii.) : 84000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University RMIT
Qor at University RMIT
RMIT University (si rasmi ah Royal Melbourne Institute of Technology, aan rasmi ahayn RMIT) waa jaamacadda cilmi dadweynaha Australia, salaysan ee Melbourne, Victoria.
aasaasay sannadkii 1887 by Francis Ormond sida College Ragga Working ee, waxaa markii hore la furay sida dugsiga habeen iyo edbinta xagga fanka ah, technology scienceand jawaab u warshadaynta ee Melbourne lagu jiro qarnigii 19. Its campus aasaaska waxa uu ku yaalaa qeybta waqooyi ee xarunta Melbourne ee magaalada, tan iyo ay noqdaan qayb ka mid ah jiidda oo ka mid ah aagga-badanaa loo yaqaan ee “RMIT Quarter”. diiwaangelinta An bilowga ah 320 ardayda 1887 ayaa koray in ku dhawaad 83,000 xirfadeed, undergraduate iyo postgraduatestudents sida 2015.
Intaa waxaa dheer in ay campus Melbourne City, waxa uu leeyahay laba xarumood radial ee nawaaxiga Melbourne oo ku yaalla xaafadaha waqooyiga of Bundoora iyo Brunswick; sidoo kale tababar iyo cilmi goobaha degaanka Melbourne magaalada iyo gobolka Grampians regionlocated ee duleedka galbeed ee Point Cook oo magaalada Hamilton siday u kala horreeyaan. caalami, waxa uu leeyahay laba xarumood laan in Vietnamlocated ee magaalada Ho Chi Minh iyo Hanoi; iyo sidoo kale xarun Yurub ku yaalla Barcelona, Spain.
Waa dugsiga sare ee farshaxanka iyo design ee Australia iyo in Hemisphere ee Koonfurta (16-aad ee adduunka) sida ay Rankings Adduunka University.
Mid ka mid ah jaamacadaha asalka Australia, University RMIT jecel yahay sumcad caalami fiican ee waxbarasho xirfadeed iyo xirfadeed, cilmi dhaqmo, iyo hawlgelinta la baahida warshadaha iyo bulshada.
RMIT waa hogaamiyaha aduunka ah Art iyo Design; Naqshadaha Dhismaha iyo Deegaanka dhisay; Engineering; Accounting iyo Maaliyadda; iyo Ganacsiga iyo Maamulka Studies.
RMIT School of Business IT iyo Logistics
RMIT School of Economics, Maaliyadda iyo Suuq-
RMIT School of Graduate Business iyo Sharciga
RMIT School of Vocational Education Business
College of Design iyo Xaaladda Bulshada
RMIT School of nashkhadda dhiska iyo farshaxanimada
RMIT School of Fashion iyo Dharka
RMIT School of Global, Urban iyo Cilmiga Bulshada
RMIT School of warbaahinta iyo isgaarsiinta
RMIT School of Property, Dhismaha iyo Maamulka Project
College of Science, Engineering iyo Caafimaadka
RMIT School of Sciences Caafimaadka iyo Biomedical
RMIT School of Health Vocational, Engineering iyo Sciences
College Ragga Working ee Melbourne furay on June 4, 1887, iyadoo xaflad ka dheceysa garoonka Town Hall Melbourne ee a, noqoto bixiyaha shanaad jaamacadaha waxbarashada ee Victoria (Melbourne Athenaeum la aasaasay 1839, Jaamacadda Melbourne ee 1853, School Ballarat ee Macdanta ee 1870 iyo Dugsiga Bendigo ee Macdanta ee 1873). Waxay qaadatay 320 diiwaan habeenkii furitaanka ay.
Waxaa furay sida dugsiga habeen iyo edbinta xagga “tahay, sayniska iyo tiknoolajiyada”-in erayadii ay founder-”gaar ahaan ragga ka shaqeeya”. Ormond ahaa Mu'min ah shirkadda xoogga badalka waxbarashada oo rumaystay kulliyadda noqon lahaa “muhiimadda ugu weyn iyo qiimaha” si warshadaynta ee Melbourne lagu jiro qarnigii dabayaaqadii-19-ka. In 1904, waxaa lagu dari ah oo ka hooseeya Xeerka Shirkadaha sida college gaar ah.
Inta u dhaxaysa Warega ee qarnigii 20aad iyo 1930, waxaa la ballaariyey badan deriska Old Melbourne jireyso iyo dhisay dhismayaasha farshaxanka cusub, injineernimada iyo radio dugsiyada. Waxaa sidoo kale ay qayb ugu horeeyay ee dagaalka Australia ayaa iyada oo loo marayo tababarka shaqaalaha military ku soo laabtay ka Dagaalkii Adduunka. Ka dib markii codsi ay ardayda, waxaa si rasmi ah magaceeda ilaa College Melbourne Farsamada isbedeshay 1934.
college The balaariyay kaalin weyn in ay dadaal Australia ee lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida ay tababar lixaad ka mid ah ciidamada dalka ee shaqaalaha-oo ay ku jiraan inta badan saraakiisha ay isgaarsiinta Royal Australian Air Force. Waxa kale oo loo tababaray 2000 dadka rayidka ah ee munitionsmanufacturing oo ahaa wakiishay Dawlada Australiya soosaarka qaybo-oo ay ku jiraan diyaaradaha military inta badan qaybaha for Qarax Beaufort ah.
Ka dib dagaalkii labaad ee dunida, in 1954 taasu waxay noqotay bixiyaha waxbarashada sare ugu horeysay Australian in la abaal bacdi boqornimada (by Elizabeth II) ay adeeg si Commonwealth ee aagga waxbarashada iyo in ay ka qayb qaateen in ay dadaal dagaalka; oo waxaa si rasmi ah loo baxshay ah “Royal Melbourne Technical College”. Waxaa noqday (oo ilaa maantadan la joogo) hay'adda waxbarashada oo kaliya ka sareeya ee Australia oo xaq ah horgalaha “Royal” oo ay la socoto isticmaalka Boqortooyada ee regalia England ee.
Its magaca waxaa si rasmi ah bedelay si Royal Melbourne Institute of Technology ee 1960. Inta lagu jiro qarnigii-20-ka, waxaa la isku uruurisay sida bixiye waxbarasho guud oo sare iyo xirfadaha, iyo waxbarashada dual waaxda waxay horseedday in Australia. Waxa kale oo ay bilaabeen hawlgelinta la Southeast Asia waqtigaan (Qorshaha Colombo Dawlada Australiya ee). In 1979, deriska Emily McPherson College of Domestic Dhaqaalaha la RMIT biiray.
Ka dib markii ay ku biirtay Institute Phillip ee Technology ee 1992, waxa ay noqotay jaamacada guud by fal Dawlada Fiktooriya ka hooseeyaRoyal Melbourne Institute of Technology Act 1992. Inta lagu jiro 1990, jaamacadda maray ballaarinta degdeg ah oo soo fujiyo la tiro ka mid ah jaamacadaha iyo machadyada dhow. College Melbourne ee Qurxinta iyo Design biiray RMIT in 1993, in la abuuro dugsi cusub TAFE design quduuska, raacay by College Melbourne ee Daabacaadda iyo Graphic Arts in 1995. Oo sannaddaas isla, waxaa laga furay campus radial ugu horeysay ee Bundoora in nawaaxigeeda Melbourne waqooyiga. In 1999, waxay heleen Institute Melbourne ee campus Dharka ee Brunswick in nawaaxigeeda ugu hooseeyey-waqooyiga Melbourne ee dugsiyada ay TAFE design.
At Warega of qarniga 21aad, waxaa lagu casuumay Dowladda Vietnamese noqotay jaamacadda ugu horeysay ay leeyihiin ajaanib ah ee dalka. laanta horeysay Its campus caalamiga ah ka furmay magaalada Ho Chi Minh in 2001 iyadoo labaad ee Hanoi ee 2004. In 2013, waxaa la aasaasay joogitaanka a Yurub by furitaanka xarun ee Barcelona, Spain.
Ma rabtaa wada hadlaan University RMIT ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University RMIT on Map
Photos: RMIT University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University RMIT
Ku biir si ay ugala hadlaan of University RMIT.